Muriwo Mabhisikiti Akatenderera
Yedu Yemuriwo bhisikiti rakatenderedzwa rakagadzirwa kubva kune yekutanga organic furawa, ivhu neyakagadziriswa yakasarudzwa yeAustralia gorosi, pamwe nemiriwo mizhinji yemiriwo. Nezvigadzirwa zvemberi zvekugadzirisa uye matekinoroji akaisvonaka epasi-mafuta bhisikiti rakaoma, yakaderera mumafuta uye yakakwira mucalcium uye chikafu chimiro chikafu chakagadzirwa. Iyo yakapfuma muzvinhu zvakasiyana siyana zvinodiwa nemuviri wemunhu. Vatengi vanokwezva nerudzi rwayo rukuru, crispy uye kuravira kwemuriwo. Uye zviri nyore kutakura uye kuchengetera payo diki uye yakanaka pasuru. Uye isu tinokwanisa kugadzira mavhenji matsva akasiyana akateedzana zvinoenderana nevatengi 'uye misika' zvinoda.
hupfu hwegorosi (Australia gorosi) (60%), shuga yakawanda, oiri yemiriwo, karoti (5.1%), kupfupisa, glucose, chives (2.2%), sesame, malt syrup, maltodextrin, starch, zai, munyu, zvekuwedzera zvekudya (sodium bicarbonate, phospholipids, focal dihydrogen phosphate disodium, beta carotene, sodium metabisulfite), mbiriso, tomato (1.5%), hanyanisi (1.3%), celery (0.8%), coriander (0.8%), sipinashi (0.5%), broccoli ( 0.5%), Chinese kabichi (0.5%), miriwo miriwo (0.4%), zvinonhuwirira zvinodyiwa.
Chigadzirwa chigadzirwa: bhisikiti rakaoma
Tsanangudzo: 90g * 30 mabhegi / CTNs
Pasuru: Mabhegi emukati, ekunze Makatoni. (Around mazana mana emabhokisi pa20 GP mudziyo.)
Pasherufu hupenyu: 10 Mwedzi
Chitupa: HACCP, ISO9001: 2005
Zvimiro zveMuriwo wemabhisikiti akapoterera
1.Miti miriwo yakasanganiswa, yakapfuma muzvinhu zvakasiyana siyana zvinodiwa nemuviri wemunhu
Yakareruka kurongedza dhizaini, yakanyanya kunaka
Pashure: Crispy Mabhisikiti
Zvadaro: Hawthorn Lollipop
Vana Mabhisikiti, Soy Sauce Mapaketi, Hawthorn Strip, Mutsva Bean Curd Stick, Ladyfinger Cookie, Kudya Nzungu Dzakarungwa,